We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒေါ်စု ထိုင်းခရီးစဉ် စီမံခန့် ခွဲ မှု လို ဟု နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာဖေါ်ပြထား
ဒေါ်စု ထိုင်းခရီးစဉ် စီမံခန့် ခွဲ မှု လို ဟု နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာဖေါ်ပြထား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမဆုံးနိင်ငံခြားကိုထွက်လည်တဲ့ခရီးကတော့သံတမန် တွေ အတွက်
စိတ်ကသိကအောင် ဖြစ်နေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။ နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာခေါင်းစဉ်းမှာတော့ ပြင်ဆင်မှုညံတယ် ( Amid Disorganization, Aung San Suu Kyi Visits Thailand ) လို့ ဖေါ်ပြထားတာတော့အတော့ကို ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ဒေါ်စု ပါတီက လူတွေက
အဆင့်မြင့်သံတမန်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အတော့ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ လိုဦးမယ်။ဒေါ်စုကတော့
နှစ်ပေါင်းများစွာအိမ်မှာအကျယ်ချုပ်ခံထားရတော့ ထားပါတော့လေ။ အခုသူခရီးစဉ်ကို
တာဝန်ခံ သူက ခွန်သာမြင့် လို့ သိရတယ်။ သူမှာ နိင်ငံရေးနဲ့ သံတမန်ရေး ဘာမှ အတွေ့ အကြုဲံမရှိ
ဘူး။ သူက ဒေါ်စုအိမ်ကို ပဲ ပြင်တတ်သူတဦးသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုို့ နိင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင် ကြီး ထိုင်းနိင်ငံထဲကို ၀င်လာတာက
အတော့ကို ရုပ်ဆိုးလှတယ်။ ထိုင်းနိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆက်သွယ်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ 
ထိုင်းနိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သနီ( Thani ) ဆိုတဲ့အကြောင်းကို နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒုကသည်စခန်းတွေကို သွားမယ်လုို့ သိရတယ်။ ဒီစခန်းတွေက နှစ်န်ိင်ငံကြားမှာ ပြသနာတရပ်ဖြစ်နေတဲ့စခန်းတွေ ဒီစခန်းတွေကိုသွားရင်ထိုင်းနိင်ငံရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ အတွက်လည်း ဒေါ်စု ရဲ့ အဖွဲ့ က ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကို တရားဝင်အကြောင်းကြားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အလားတူပဲထိုင်းနိင်ငံအခြေစို က်
ဒုကသည်တွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့BBC တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘူး။
ခွန်သာမြင့်ကိုဖုံးခေါ်ကြသော်လည်း ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘူးလို့ သိရပါါတယ်။
သူလာမယ်ဆိုတာကို မီဒီယာကပဲကြားရတယ်။ ကျနော်တို့ကိုသူမရဲ့အဖွဲ့ ကဆက်သွယ်ခြင်းလုံးဝမရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးညဏ်ဝင်း ကိုဖုံးခေါ်သော်လည်း မရဘူးလို့ သိရတယ်။ ဒေါက်တာစင်သီယာဆေးခန်းကိုသွားရောက်ဖို့ရှိသော်လည်း
ဒေါက်တာစင်သီယာ မောင်ကိုလည်းဒေါ်စုနဲ့တွေ့ မဲ့ အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းမဆွဲထားဘူးလို့ သိရတယ်။
အဖွဲ့ ဟာ တော်တော်လေးကို ဖယိုဖရဲ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။
ဒီကြားထဲ မီဒီယာနဲ့တွေရင် အတော်ကို စကားသွက်လှတဲ့ဒေါ်စုက သူကို မျော်လင့်တကြီးစောင့်စားနေတဲ့ မီဒီယာသမားတွေကို ဘာတခွန်းမှာ မပြောသွားဘူးလို့ 
ဒီပုံနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီချုပ်တွေ စီမံခန့် ခွဲ ပုံတွေကြောင့် ဒီမိုကရေစီအရေး အတွက်ရင်လေးမိပါကြောင်း။
မိုးသီးဇွန်ရေ ခင်ဗျားကို သံတော်ဦးတင်ရမှလား
Stupid Moe Thee. Don't be jealous.
Hi,ko moe thee,you shouldn't say anything mistake about Aunty,no one perfect,they try their best,they do their way.They have no experience.Why you and lwan swe talking about aunty?I don't understand.you should to stay aunty side.everybody have different Idea,you have to understanding,Why do you want to be saya gyi?If you haveafellow -felling for the other,you will be leader one day,I knokn your used to be our student good leader.Don't make mistake again,please,respect eachother,you should to respect to Aunty,you should have respectable behaviour,Thanks Ko moe thee
yes no one is perfect but she is no perfect.is that clear?
yes no one is perfect but she is not perfect .is that clear?
you fucking idiot. you don't have to be shame of some fucking headline from news. Believe me i could say that you can not do better or no one else could.
It wasastupid article by an idiot.
She did not come to BKK to make an interview at the airport but to make the good deeds in the city.
Learn more about Myanmar and A May Su.
ချို့ ယွင်းချက်တွေကတော့ အဖက်ဖက်မှာရှိမှာပါပဲ။
ဒါပထမဆုံးပြည်ပခရီးကိုး။ နောက်အတွေ့ အကြုံရလာရင်တော့ အဆင်ပြေချောမွေ့ သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် တကယ့်ဂုဏ်တင့်တဲ့ တခေတ်တယောက်ရှားရှားပါးပါး ခေါင်းဆောင်ပါဗျာ။
Rubbish Moe Thee Zone! Jeolously man!
အပေါ်ကလူတွေ ရေးထားပြီးလို့ သိပ် များများတော့မရေးတော့ ဘူးနော် ။ ခင်ဗျားကို
အန်အယ်လ်ဒီ ရဲ့သံတမန် ရေးရာ အတွင်းဝန် ခန့် ဘို့ အဆို ပြု ပေးမယ် ။
Yes no one is perfect!
yes no one perfect but she is no pe
rfect.is that clear?
you said.....like that.hi man,do you know that she doing for not for her,not for her family,not for her relation.she doing for us,for our people and country.if she made mistake,no problem we can understand,we try to fix for her.why most of the leader support to her on the world do you know?because you are useless.If they known your better than her,they will contact you.you can dream,may be next life,see you at hell..
please,Don't say to Ko moe thee about mistake,I know about his felling,Now we are on the same boat and same direction,we have to stand together.we may different Idea,different looking and different thinking,but we are myanmar,we should to stand together for freedom,please respect each other.Hi ko moe thee,I respect you for what you did.(at 1988) cheer up
Hi Ko Moe Thee,
I didn't respect you for what you did (actually didn't) during last 20 years.
Moe thee zun yay minn thate pee lee shay nay pa ler..kotalote Ko lote...don't be jaelous.
First of all, I think you people are starting to mix up the lines between what is right and wrong, what is should and shouldn't. She's certainlyaHERO, no doubt about it. But there are certain protocols you need to follow in International Relations. Mind you, Nelson Mandela was onceaHero like Daw Aung San Su Kyi. But under his first term of governing South Africa, he eventually has to apologize the country for his missteps in politics. No one is perfect, its true. But once you becomealeader, you are responsible for all actions and consequences. It may be her people's immaturity in dealing with such circumstances, but it is her responsibility to put the right people in the right place. When she governs Myanmar, what would happen if she put such people in ministry positions, such people who only know blind politics(I hardly call that politics, I would rather call it personal worship) which would result chaos and faulty results. And you, should start to understand the line between that personal worship and true politics and nationalism and patriotism. I'm not defending Ko Moe Thee, but I simply refuse to shut my other eye while my country's Hero making mistakes which onlyachild would do, and let her get away with it. Oh by the way, there'sasuper fine line between patriotism and just being rude. I hope you gentlemen would understand the point I am trying to make.